LDN (कम खुराक नल्ट्रेक्सोन) फाइब्रोमाइल्जियाको उपचारमा
20 / 11 / 2015 /0 टिप्पणीहरू/i Fibromyalgia/av भोंड्ट
यो दावी गरिएको छ कि LDN (लो डोज नल्ट्रेक्सोन) ले एन्डोरफिनको स्तर बढाउन सक्छ र यसैले धेरै पुरानो अवस्थाहरूबाट राहत पाउन सक्छ। यसमा फाइब्रोमाइल्जिया, ME / CFS र क्रोनिक थकान सिंड्रोम समावेश छ। तर यो कसरी काम गर्दछ?
LDN के हो (कम खुराक नल्ट्रेक्सोन)?
कम-डोज नल्ट्रेक्सोन (LDN) एक औषधि हो जुन कम खुराकमा (3-4,5-.XNUMX.mmg / दिन) ले मोर्फिन जस्तो पदार्थहरूको प्रभावलाई रोक्दछ। अधिक मात्रामा, नल्ट्रेक्सोन मद्यपान र ओपिओइड निर्भरताको उपचारमा संयमको लागि प्रयोग गरिन्छ। LDN अन्यथा प्रणालीगत संयोजी ऊतक रोगहरू, स्वत: प्रतिरक्षा अवस्था जस्तै मल्टिपल स्क्लेरोसिस (एमएस) र वायमेटिक अवस्था बिरूद्ध मद्दत गर्न भनिन्छ। fibromyalgia - साथै अन्य शर्तहरू जस्तै ME र क्रोनिक थकान सिंड्रोम।
कसरी LDN काम गर्दछ?
नलट्रेक्सोन एक विरोधी हो जुन कोशिकामा ओपियोइड रिसेप्टर्समा बाँधिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, LDN अस्थायी रूपमा मस्तिष्क एन्डोरफिन अपटेक रोक्दछ। एन्डोरफिनहरू शरीरको आफ्नो पीडा दबाउने व्यक्ति हुन् र मस्तिष्क आफैंले उत्पादन गर्दछन्। यो कारण हुन सक्छ दिमागले यसको आफ्नै एन्डोरफिन उत्पादन बढाउँदै क्षतिपूर्ति दिन्छ। नतिजा एक बढेको एन्डोरफिन स्तर हो जसले पीडा कम गर्न र कल्याणको भावना बढाउन सक्छ। एन्डोर्फिनको बृद्धि भएको उत्पादनले यसैले दुखाइ, ऐंठन, थकान, लहर र अन्य लक्षणहरूको बिरूद्ध सहयोग गर्दछ, तर कार्य संयन्त्र र अन्तिम परिणामहरू देखिन बाँकी छ।
- ओपिओइड लतको उपचारमा प्रमाणित प्रभाव
नलट्रेक्सोनले हेरोइनको प्रभावलाई पनि रोक्छ (जुन मोर्फिनबाट संश्लेषित हुन्छ) र ओपिओइड लत कम गर्न सहयोगी साबित भयो। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) जस्ता सरकारी एजेन्सीहरूले पुरानो ओपिओइड निर्भरता र लागूऔषधको दुर्व्यसनको उपचारको लागि नाल्ट्रेक्सोनको प्रयोगलाई अनुमोदन गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - रोजा हिमालयन नुनको अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभहरू
यो पनि पढ्नुहोस्: - Healthy स्वस्थ जडिबुटीहरू जुन रक्त संचार बढाउँछन्
तपाईलाई LDN (कम डोज नल्ट्रोक्सन) को बारे थाहा पाउनु पर्छ:
- LDN ले पेनकिलरको प्रभाव रद्द गर्न कार्य संयन्त्रको माध्यमबाट गर्न सक्दछ
- नर्वेमा रेजिष्टर गरिएको औषधि नभएकोले एलडीएन छुट्टै फारममा डाक्टरले तोक्नु पर्छ
- सिफारिश गरिएको दैनिक खुराक .3-.4,5. mg मिलीग्राम हो जुन रातमा २१.०० र ०.०.०० बीचमा लिन्छ, जुन शरीरको एन्डोरफिन चक्रसँग सम्बन्धित छ।
- एलडीएनले रुमेटिक रोगहरूको बिरूद्ध रोग-दबाउने प्रभावको अभिलेख राखेको छैन
यी औषधीहरू LDN (फाइब्रोट्रस्ट अनुसार) को साथ लिनुहुन्न:
Codeine Cough Syrup Syrup द्वारा सक्रिय गरिएको
अमोजेल पीजी ®
कोडिनको साथ एस्पिरिन
ठूला र कोडिन मौखिक समाधान
कोडिनल PH ®
डिमेटेन-डीसी कफ सिरप ®
Codeine Emp को साथ इम्प्रिन
Codeine with को साथ Fioricet
कोडाइन with को साथ फियोरिनल
Humira - N
इमिडियम एडी ®
Infantol गुलाबी ®
कोडिने® सँग काओडिन
प्यारेगोरिकसँग Kaodene od
नोवाइस्टाइन डीएच ®
कोडेइन with को साथ फिनाफेन
Codeine with को साथ Phenergan
प्रोमेथेजाइन VC कोडिनको साथ
रिमिकेड - 50० दिनको बाहिर हुनुपर्छ
रोबिटसिन डीएसी ®
कोडिनको साथ सोमा
Triineic Expectorant Codeine amin को साथ
SF ween को बिच
मांसपेशी र जोड़ दुखाईको लागि पनि म के गर्न सक्छु?
१. सामान्य व्यायाम, विशिष्ट व्यायाम, तान्न र गतिविधि सिफारिस गरिन्छ, तर पीडा सीमा भित्र रहनुहोस्। २०-1० मिनेटको दुई दिनमा दुई दिनमा हिड्दा सम्पूर्ण शरीर र मांसपेशिको लागि राम्रो बनाउँदछ।
2. ट्रिगर पोइन्ट / मसाज बलहरू हामी दृढताका साथ सिफारिस गर्दछौं - तिनीहरू फरक आकारमा आउँदछन् ताकि तपाईं शरीरको सबै भागहरूमा पनि राम्रो हिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस भन्दा राम्रो अरू कुनै मद्दत छैन! हामी निम्न सिफारिस गर्दछौं (तलको छवि क्लिक गर्नुहोस्) - जुन5ट्रिगर पोइन्ट / मसाज बलहरू विभिन्न आकारमा सेट हुन्छ।
3. प्रशिक्षण: बिभिन्न विपक्षीहरूको प्रशिक्षण युक्तिको साथ विशिष्ट प्रशिक्षण (जस्तै यो विभिन्न प्रतिरोध को6निट को पूर्ण सेट) तपाईंलाई बल र कार्य तालिम दिन मद्दत गर्दछ। निट ट्रेनिमा प्राय: थप विशिष्ट प्रशिक्षण सामेल हुन्छ, जसले परिणामस्वरूप अधिक प्रभावकारी चोटपटक रोकथाम र दुखाइ घटाउन सक्छ।
4. पीडा राहत - शीतलन: बायोफ्रीज एक प्राकृतिक उत्पादन हो जुन यस क्षेत्रलाई बिस्तारै चिसो पिएर पीडा कम गर्दछ। शीतलन विशेष गरी सिफारिस गरिन्छ जब पीडा धेरै गम्भिर हुन्छ। जब उनीहरू शान्त हुन्छन् तब तातो उपचारको सिफारिस गरिन्छ - यसैले दुवै शीतलन र तातो उपलब्ध हुनु राम्रो हुन्छ।
5. पीडा राहत - तताउने: तंग मांसपेशीय पदार्थ न्यानो गर्न रक्त रगत र वृद्धि र दर्द कम गर्न सक्छ। हामी निम्न सिफारिस गर्दछौं पुन: प्रयोज्य तातो / चिसो गस्केट (यसको बारेमा अझ बढी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) - जुन दुबै शीतलन (स्थिर गर्न सकिन्छ) र तताउन (माइक्रोवेभमा तताउन सकिन्छ) प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मांसपेशिहरु र जोड़को दुखाई को लागी पीडा राहत को लागी सिफारिस उत्पादहरु
बायोफ्रीज (चिसो / क्राइथेरपी)
यो पनि पढ्नुहोस्: फाइब्रोमाइल्जिया, ME / CFS र जीर्ण थकानको उपचारमा D-Ribose?
२०.११.२०१ Pub प्रकाशित गरियो - Vondt.net
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/LDN-Kjemisk-format.jpg?media=1648573622 568 675 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2015-11-20 22:15:402019-06-29 17:39:17LDN (कम खुराक नल्ट्रेक्सोन) फाइब्रोमाइल्जियाको उपचारमा
१० को पृष्ठ १«<91011